Imithetho inceda ukulungiselela indawo ukuze indlu ibe namandla amaninzi. Kwizikhundla ezinjalo, abaninzi abantu bayakholelwa kwaye bamema iingcali ezifanelekileyo kwi-feng shui, abanceda ukulungiselela kakuhle ifenitshala efanelekileyo ngaphakathi.
Imithetho elishumi yegolide efuna ukukhokelwa ngokuhlela indawo yokuhlala.
Kubalulekile ukwenza umnyango wendawo ube nobungane, ekubeni amandla angenelo angena endlwini ngendlu yakho yangaphambili. Ingqungquthela yendlu ikumema ukuba ungene. Ayikho indawo yeentyatyambo ezifayo okanye izinto eziphukileyo.
Ikamelo ngalinye limele lifakwe ngokulandelelana, lidala ukuvisisana ebomini nasendlwini. Ukudideka kwiindlu kunciphisa amandla amandla kwaye kuphazamise iingcamango ezimbi. Yonke into ephukile, ekhumbuza izinto ezimbi kwaye ingasetyenziswanga, kufuneka ilahlwe.
Ifenitshala kufuneka ilungiselelwe ngokufanelekileyo ukwenzela ukuba kukho inqaku elikhululekile kwigumbi. Ukuba kunokwenzeka, abantu bafanele bahlale kunye nomqolo wabo.
Ukwahlula indawo yokuphumla nokusebenza. Indawo yokusebenzela endlwini okanye kwikhabhinethi kufuneka ibe kude namagumbi okulala kunye namagumbi okuhlala. Xa izikhala zidibanisa, ukuphumla kuya kuba nzima, kwaye kwizinto zokusebenza zokulala ziza kuphazamisa ubuthongo obubusuku.
Izinto eziphazamisekileyo kufuneka zilungiswe ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza. Ukuba indlu iya kulungiswa kwiifestile, iingcango okanye izitebhisi, ziza kunciphisa ukuhamba kwamandla amandla.
Kukholelwa ukuba izibuko zibonakalisa amandla amandla kwaye ziphinde ziphindwe kabini amandla, nazo zimi apho amandla ambi ephuma endlwini. Musa ukulenga isibuko ngqo phambi komnyango wangaphambili, njengoko isibuko sibonakalisa amandla asemandleni kwaye siyikhupha.
Hlela iziqhamo, izityalo kunye neentyatyambo
Oku kuya kubangela amandla amandla. Ngaphandle kwezityalo ze-spiny. Isiqhamo esinqabini kwigumbi lokulala singakhuthaza ubomi bokuziphatha ngokwesini, kunye nemifanekiso yeelom kunye nee-orangesi kuletha inhlanhla endlwini.
I-Feng Shui ekuguquleleni ithetha "amanzi kunye nomoya". Imizobo ebonisa amanzi idibanisa kunye nokuphumla.
Ekhaya, sebenzisa imibala efanelekileyo, ibaluleke kakhulu. Oluhlaza lithetha uhlobo, ithemba kunye nobomi. Inhlanhla enobomvu nebomvu, amandla amthubi. Kwiindawo zokuhlala kufuneka usebenzise imibala ephumayo kuphela.
Gwema amakhonkco abukhali kunye nemigca. Ingqungqungquthela e-Feng Shui ikhupha amandla ambi, mhlawumbi iifom ezijikeleziweyo. Iibhilo akufanele zijoliswe kwiityhini okanye kwiibhedi, njengoko zingavumeli ukuzincama nokuphumula.
Iingcebiso eziNcedo eziMahla: Indlela yokuLahla amaMoths
Indlela yokukhetha i-caviar efanelekileyo
Umhla wokuqala: iingcebiso zamantombazana
Indlela yokukhetha iingubo zentsana, ubukhulu bezingane
Ukuba awunayo imali eyaneleyo yokuhlala
Yiphi ipakethe engcono ukuthenga
Izakhelo zezintombi ezintle zeNyaka omtsha 2016 kwizinwele eziphakathi, ifoto
I-Salad cocktail "I-Winter Gourmet"
Jam kusuka kwi-gooseberry
Izinja zePocket, zithini na amatye?
Ipasta yaseMexican evela kubhontshisi
Ngawaphi amagama abuyisela umfana?
Ungayigcina njani isikhumba emanzini?
Isondo kunye neengxaki zamadoda
Ukubonakala komntu kufaka njani ubudala bakhe nobuntu bakhe
UDasha Malakhova, idayari yokutya